Saturday July 15, 2017 - 20:52:26 in Wararka by Super Admin
Barxadda masjidka barakeysan ee Al-Aqsa wuxuu maanta martigeliyey malxamad adag oo dhexmartay Halyeeyo naftood hurayaal ah iyo Ciidamada Yahuudda taas oo galaafatey nolosha dhowr ka mid ah askarta Yahuudda, Halyeeyaduna ku gaareen wixii ay raadinayee
Mid ka mid ah halyeeyada fuliyey weerarka oo lagu magacaabo Maxamed Xaamid ayaa ka hor inta uusan howlgalka
fulin wuxuu bartiisa Facebook-ga ku soo qoray hadal muujinayey in uu camaliyadan u socdo.
Dowladaha Caalamka islaamka oo Cambaareymo ku gaabsaday
Dhinaca kale qaar katirsan dowladaha caalamka islaamka ayaa si kulul ucambaareeyay xoog ku gelidda ay ciidamada Yahuuddu xoogga ku galeen Masjidka Bakeysan ee Al-aqsaa.
Bayaan kasoo baxay dowladda Urdun ayay ugu baaqday waxa loogo yeero Beesha caalamka in ay soo farageliyaan xaaladda Masjidul aqsaa iyo tacadiyada ay ciidamada Yahuuddu ugeysanayaan dadka muslimiinta ah.
Sidoo kale dowladda Qadar ayaa si kulul u weerartay xiridda Masjidka Barakeysan ee Al Aqsaa sida lagu xaqiijiyay bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qatar.
Taliban oo Cambaareyn kulul Jeedisay.
War qoraal ah oo kasoo baxay imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa si kulul loogu cambaareeyay tacadiyada cusub ee ciidamada Yahuuddu ka geysanayaan Masjidka Al-aqsaa, Taliban ayaa muslimiinta caalamka ugu baaqday in ay difaacaan masjidka iyadoona Ururka islaamka iyo dowladaha caalamka islaamka ugu baaqday in ay u istaagaan joojinta tacadiyada ka imaanaya dhanka Yahuudda.
Hoos ka daawo Falcelinada ka bixiyay xiridda Masjidka Al-aqsaa.